Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni i-Bärenegg: iphasela elincane e-Lake Thun - I-Airbnb
Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni i-Bärenegg: iphasela elincane e-Lake Thun
Merligen, Bern, i-Switzerland
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Nadine & Marco
U-Nadine & Marco Ungumbungazi ovelele
I-Chalet Bärenegg igxiliswe ngokumangalisayo endaweni yamachibi nezintaba zaseBernese. Ngaphakathi incane futhi inesikhala esincane sokugcina, kodwa ngaphandle inezindawo ezinhle zokuhlala: izihlalo ezimbili ezine-BBQ, i-sauna yangaphandle futhi, kwabancane, i-meadow, i-sandpit kanye nama-slide.
Lapha ungakwazi ukuzwa ukuthula namandla emvelo phambi kwe-Niesen enamandla kanye nombono omangalisayo wechibi. Izinketho eziningi zokuvakasha ezizungeze iLake Thun zenza ukuhlala kwakho kube okokuzithokozisa okuyingqayizivele.
Ikhishi livulekele egumbini lokuphumula, lapho kukhona nombhede usofa. Iladi liholela endaweni yokulala enomatilasi abane. Igumbi lezingane elincane elinombhede oyibhinki liholela esihlalweni esivikelekile esine-sauna yangaphandle kanye neshawa.
Igumbi lokugezela le-flagstone linobhavu wokugezela onombono wechibi. I-balcony ikumema ukuthi uhlale emoyeni omusha, kuyilapho iwayini lakho livuthwa egumbini elingaphansi futhi ibhola lezinyawo letafula lidala isimo esijabulisayo.
Engadini uzothola indawo yomlilo, izihlalo ezihlukahlukene kanye nemishini yokudlala yezingane.
1 umbhede wosofa, omatilasi abangu- 4
I-Wifi – 23 Mbps
4.93 · 127 okushiwo abanye
I-chalet itholakala ngqo kumzila wokuhamba, olungele ukuhamba nokuhamba ngezinyawo. Ichibi lihlala lipholile, futhi uzothola inala yamathuba okubhukuda kanye nokufinyelela okuqondile kunethiwekhi yemikhumbi. Amadolobha amahle aseThun, eSpiez nase-Interlaken aqhelelene netshe. Ebusika ungafinyelela izindawo eziningi zokushushuluza e-Bernese Oberland cishe imizuzu engama-30.
Ibungazwe ngu-Nadine & Marco
Unayo i-chalet ngokwakho. Ukhiye ugcinwe nekhodi endaweni yokhiye eduze komnyango wokungena.
UNadine & Marco Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Merligen namaphethelo